Ikopa : Natahotra fitsaram-bahoaka dia nitsoraka tao – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → août → 2 → Ikopa : Natahotra fitsaram-bahoaka dia nitsoraka tao
Niainga tamin’ny halatra bisikileta ny raharaha ary niafara tamin’ny fahafatesana. Ny asabotsy teo, manodidina ny tamin’ny dimy ora hariva, no nisy nahatsikaritra ny roalahy naka ny bisikileta iray nipetraka amoron-dàlana tetsy Marobiby. Vetivety dia niely ny feo ary vory ny olona. Nifanenjehana ireo mpangalatra nanomboka teo. Rehefa tsapan’izy ireo fa mihamitombo ary miha-manakaiky hatrany ireo olona dia nanapa-kevitra izy ireo ny nitsoraka tao amin’ny reniranon’Ikopa mba ho fanavotanany ainy. Ny iray mba nahavita niampita rano ihany fa ny iray kosa nentin’ny riaka. Ary tsy hita raha tsy ny ampitson’iny, izany hoe ny alahady teo. Tany amin’ny sampanana mizotra an’Ambohitrimanjaka, tsy mifanalavitra amin’ny mpivarotra tao zavatra malagasy no hitan’ny olona ilay vatana mangatsiaka. Tovolahy 21 taona izy io, raha araka ny fanazavan’ny zandary, ary monina eny Andramahavola-Itaosy. Avy amin’ny fahafantarana azy no nampizotra ny fanadihadian’ny mpitandro ny filaminana tany amin’ny fisamborana olona roa hafa izay ahiana ho niray tsikombakomba taminy. Ny bisikileta kosa dia tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony rehefa navelan’ireo mpangalatra fotsiny mba ho fanavotana ny ain’izy ireo. Zavatra roa no azo tsoahina amin’ity tranga ity. Voalohany, tena efa betsaka ny olona farahidiny ary dia mizotra any amin’ny hala-botry sy asan-jiolahy. Nisy fotoana dia tsy dia nisy intsony izany halatra bisikileta izany satria fantatra fa sady sarotra ny mitsoaka aminy raha misy manenjika no koa tsy misy vidiny firy. Saingy izao, mila hidiana hatrany ity fitaovam-pitaterana ity na aiza na aiza aleha satria tena tian’ny mpangalatra. Faharoa manaraka izany, efa lasa fanao manerana ny nosy ny fitsaram-bahoaka, kanefa na tamin’ny faha-mpanjaka aza dia mbola nampiasaina ny tangena rehefa voasambotra ny jiolahy. Izany aza dia mbola misy didin’ny mpanjaka izay vao azo natao ny mandatsa-drà. Izao kosa dia tsy fantatra hoe nihemotra taiza ho aiza amin’ny tantaraisika. Izay voasambotra dia dorana na vonoina amin’ny zava-maranitra. Toa tsy ao anatin’ny lohan’ny olona intsony izany hoe fanajàna ny zon’olombelona izany.
harter 2 août 2018 at 13 h 00 min · Edit
Reo mpanao ratsy eto dago ve mba manaja ny zon’olombelona tahakazy.Toa ny mpanao ratsy ndray no mahazo vahana ankehitriny.Leo ny vahoka fanjakana tsy mandray andraikitra de aleo ny vahoka no mandray fepetra.Tsisy fika ntsony fa io sisa ny solution.Ataovy ny sondage fa majorité malagasy est pour.
Liliane Averty 2 août 2018 at 12 h 24 min · Edit
Momba n’y mpangalatra sy ny fitsarambahoaka . Mahantra Tanteraka ny Firenena Malagasy , tsisy asa dia manao alabotry juste ny mba hihinana fa noana.rehefa tratra dia ny aina no manefa .Vonoina ohatran’ny mamono biby ,dorana ohatran’ny mandoro kisoa . Ho antsika tompon’entana angalarina koa mafy ho antsika ny vao mba mahazo n’y fananantsika …nefa ahitandoza ihany koa . Alainy ankeriny amintsika ,ny aina no manaraka indraindray rehefa voatafika . N’y mahantra Samy mahantra no mifangalatra sy mifamono . Aiza n’y Gouvernement sy ny Filohampirena Malagasy ???? Mandraisa andraikitra , Mijaly n’y vahoaka …
as de pique 2 août 2018 at 9 h 45 min · Edit
Ny mahatoky ny fitsarana intsony ny olona izany no antony mahatonga ny fitsram-bahoaka fa be loatra ny kolikoly ataon’ny mpitandro filaminana sy ny fitsrana .
midina eny ambanivohitra hianareo mpanao gazety dia manaova fanadiadiana dia ho hitanareo fa aleon’ny olona manao fitsaram-bahoaka,stria leo ny fitsrana izy ireo
izaho aloha dia makasitraka ny fitsaram-bahoaka satria efa nisy raharaha halatra sy vakotrano miaraka amin’ny fitaovam-piadiana tato aminay ar nandratra olona ny mpanafika ary voasambotra ny iray tamin’iro jiolahy nefa teo anatrehan’ny fitsrana dia nivadika adiheloka tsotra ny raharaha ary roa taona ny sazy azon’ilay jiolahy